Neymar oo xaqiijiyey inuu sii joogi doono PSG.
Home Horyaalka France Neymar oo xaqiijiyey inuu sii joogi doono PSG.
Neymar ayaa xaqiijiyay markii ugu horeysay inuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo Paris Saint-Germain inkasta wargeysyadu qoraan maalin walba in Neymar mustaqbalkiisa hubneeyn oo la leeyahay waxa uu ku laabanayaa barcelona.
Xiddiga hore ee Santos iyo Barcelona ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii uu dhaliyey labada rigoore ee axadii in kastoo PSG Laga adkaaday ciyaartaas oo 3-2 ku badisay kooxda Lorient.
Si kastaba ha ahaatee guul daradaas ayaa ka dhigtay in ay fadhiyaan booska sedexaaf kala sareynta horyaalka France iyagoo ka dambeeyaan Lille iyo Lyon hogaanka ayaana looga hayaa 3 dhibcood.
Kulankaas ka dib neymar ayaa saxaafada la hadlay waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Paris saint cherman isagoo sidoo kale sheegay in ay kusoo laaban doonaan hogaanka horyaalka Warkaan ayaa ka dhigan in uusan meel usocon xidiga brazil.
Previous articleKooxda bayern munich oo wadahadal kula jirta Dayot Upamecano.
Next articleArteta oo amaan kala duldhacay David Liuz.